Dil Ka Dhacay Buulo mareer l | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Dil Ka Dhacay Buulo mareer l
Aug 20, 2015 - Comments off	Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya Sarkaal ka tirsan Maamulka deegaanka Buulo mareer ee Gobolkaasi in lagu dilay halkaasi.
Kooxo hubaysan ayaa ka dambeeyay dilka Sarkaalkaan, waloow maamulka ay sheegayaan arimaha dilkiisa inuu salka ku haayo aano qabiil.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xaaji C/qaadir Sheikh Xuseen , wuxuuna ahaa Guddoomiye Ku xigeenkii Buulo mareer, rag hubaysan ayaa waxa ay ku weerareen gurigiisa kadibna waa ay ku dileen.
C/fitaax Xaaji Cabdulle oo ah Guddoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyada Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay dilka Masuulkaan loo geystay, isaga oo sheegay baaris kadib inay ku ogaadeen dilkiisa inuu salka ku haayay arimo ku aadan aano qabiil.
Wuxuu sheegay inaysan Shabaab ka dambeyn dilka Sarkaalkaan, Maamulkana uu ku howlan yahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa Kooxaha ka dambeeyay masuulkaan Maamulka Magaalada Buulo Mareer ka tirsanaa.
Deegaanka Buulo mareer Isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaa lagu dilay labo nin oo ganacsato ah oo Siyaabo kala duwan loo dilay, waxaana dilkooda uu salka ku hayaa arimo ku saabsan aanooyin qabiil.
Gobolka Shabeellaha hoose waxaa ka dhaca dilalka ku saleysan aanooyinka qabiilka, iyadoo maamulka uu u taag la’yahay wax ka qabashada arimahaasi.